Ị nwere ike ugbu a ibudata 32 MIUI 8 akwụkwọ ahụ aja na gị Android | Androidsis
Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja 32 MIUI 8 na gam akporo gị
Xiaomi bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama China nke kachasị amasị anyị (nke onwe, nke kachasị amasị anyị). N'ihe mara mma, ọ na-apụ apụ karịsịa maka nnukwu ọ rụchara na njedebe ya, kamakwa n'ihi na ọ bụghị nanị oke itinye aka na sistemụ arụmọrụ gam akporo na-enweghị ndị ọzọ.
Site na Xiaomi ha choro inye mmadu ihe nlere anya n'ime, ya mere ha kere MIUI, a oyi akwa nke ahaziri nke mara mma nke ukwuu, ghọrọ usoro ihe fọrọ nke nta n'otu oge dị ka gam akporo nwere. MIUI 8 rutere iji nye aka ahụ na Android 6.0 Marshmallow ma tinye ụfọdụ akwụkwọ ahụaja dị egwu ị nwere ike ibudata na ekwentị gị.
32 na akwụkwọ ahụ aja nke ga-eme na anya nke gị ama
MIUI akọrọ site na ya ukara blog a kediegwu họrọ họrọ akwụkwọ ahụ aja na-eme ka a asatọ version nke MIUI ka ị nwere ike ibudata ha na ngwaọrụ gị. Na ngụkọta, ọ bụ 29 mkpọchi ihuenyo akwụkwọ ahụ aja na atọ ọzọ na desktọọpụ na akwụkwọ ahụ ajao.
All nke ha na-abịakọrọ na faịlụ ZIP ekenyela ha na mkpebi zuru ezu, 2880 x 2560 megapixels.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na akwụkwọ ahụaja na-emebu na ịchọrọ ịgbanwe, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị hụrụ ọmarịcha mma nke MIUI mana ịnweghị ama site na Xiaomi, ugbu a ị nwere ike irite uru ma mee onwe gị nnukwu nchịkọta ebe ị ga-ahụ na akwụkwọ ahụ aja nke ụdị abụọ. N'otu aka ahụ, nkịtị, na gradients, ewepụghị na agba na minimalist ịke, na aka nke ọzọ, na akwụkwọ ahụ aja nhazi ala, n'ezie ikpọ.
Site n'ụzọ Ọ bụrụ na ọnụ gị abụghị gam akporo, ị nwekwara ike ibudata ma wụnye akwụkwọ ahụaja ndị a. Na peeji nke nbudata, ị ga-ahụkwa akwụkwọ ahụ aja nke ụdị MIUI gara aga. Bịa, ị nwere ego iji jupụta gị.
I nwere ike ibudata MIUI 8 na akwụkwọ ahụ aja kpam kpam free ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja 32 MIUI 8 na gam akporo gị
Anyị nwalere Ulefone Tiger, anyị hụkwara ya n'anya
Tigerball's success and great ihe physics na obi uto